Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » App-ka Mobilka ee XNUMX-aad ee Dukaanka Apple ee Sacuudiga
360VUZ, oo ah hormuudka immersive immersive app-ka bulsheed ayaa si weyn u miisaamaya hawlihiisa magaalada Riyadh, Saudi Arabia oo leh xafiis weyn iyo koox Sucuudi ah oo xiddigo waaweyn ah.
Iyada oo qayb ka ah qorshaheeda kobaca, xafiiska 360VUZ Sacuudigu wuxuu diiradda saari doonaa horumarinta ganacsiga, dhisida tignoolajiyada ugu dambeeyay, iyo bilaabista iskaashi cusub si loo dhiso metaverse oo ay bixiso muuqaal gaar ah oo muuqaal bulsheed ah oo ku saabsan madalkeeda iyadoo la taageerayo aragtida 2030.
Khaled Zaatarah, aasaasaha iyo madaxa fulinta, 360VUZ ayaa yiri: "Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqno kordhinta hawlgalladayada Sacuudi Carabiya si aan u dhisno Metaverse, waxaanan ku kalsoonahay inay dardargelin doonto kobacayada." Waxa uu intaa ku daray: "360VUZ ayaa kaalinta koowaad ka galay App-ka mobilada ee Apple Store ee Sacuudi Carabiya usbuucii hore, taasoo cadeyneysa in Sacuudi Carabiya ay tahay meesha ugu fiican ee lagu kobcin karo ganacsigeena oo aan sii wadno u keenista waxyaabo cusub oo bulsheed isticmaalayaashayada."
360VUZ waxa ay heshiisyo dhawr ah ku leedahay Sucuudi Carabiya waxana ay dhawaan la shuraakowday Saudi Professional League (SPL) oo ah horyaalka kubbadda cagta ee loogu daawashada badan yahay gobolka, isaga oo siinaya waayo-aragnimo buuxda oo la taaban karo dadka kubbadda jecel, iyaga oo awood u siinaya in ay daawadaan waxyaabaha muhiimka ah ee ciyaaraha kubbadda cagta SPL, iyaga oo ka dambeeya. Fiidyowyada muuqaalka ah, iyo waraysiyo gaar ah oo lala yeesho ciyaartoyga oo dhan 360 khibrad is-dhexgal iyo is-dhexgal leh.
App-ka moobilka waxa uu ka soo ururiyay lacag dhan 10 milyan oo doolar ilaa hadda laga soo ururiyay maalgashadayaasha caalamiga ah sida Knollwood, Impact46, AlTouq Group, Shorooq Partners, KBW Ventures, Media Visions, Vision Ventures, Hala Ventures, 500Startups, Magnus Olsson, Samih Toukan, Jonathan Labin, DTEC Ventures, Maalgelinta DAI, Al Falaj, Plug iyo Play Ventures, qoyska Al Rashid marka lagu daro maalgashadayaasha malaa'igaha istiraatiijiga ah.
"360VUZ waxay uga mahadcelineysaa taageerada maalgashadayaasha Sacuudiga ee si weyn u taageeray dhismaha sida AlTouq Group, Impact46, KBW Ventures, Vision Ventures, AlRashid, iyo Hala Ventures," ayuu raaciyay Zaatarah.
360VUZ waxay heshiisyo la saxeexatay in ka badan 38 shirkadood oo isgaarsiineed oo ka kala socda adduunka oo dhan oo daboolaya suuqyada sida Malaysia, Indonesia, Singapore, Saudi Arabia, Kuwait, Turkey, United Arab Emirates, Masar, Pakistan, Koonfur Afrika oo hadda si caalami ah u ballaarinaysa inay noqoto hogaamiyaha xaqiiqada kala-duwan ee leh barnaamijka moobilka bulshada ee hormuudka u ah immersive iyo maktabadda nuxurka immersive ee ugu weyn adduunka.